အသက်သုံးလပြည့်သွားပြီဖြစ်တဲ့ သမီးလေးအတွက် ဆုတောင်းစကားလေးဆိုကာ ချစ်မဝဖြစ်နေတဲ့ မေမေခင်လွှမ်း – Cele Posts
ခင်လွှမ်း ကတော့ အနုပညာ လောကမှာ နေရာတစ်ခုကို အခိုင်အမာ စိုက်ထူ ထားနိုင်တာဖြစ်ပြီး အောင်မြင်မှုတွေလည်း တစ်ခဲနက် ရရှိထားတဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ။ ဒါ့အပြင် သာယာတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့် အားလုံးက ချစ်ခင် အားကျနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ် ။
ခင်ပွန်းသည် စည်ဖြိုးကလည်း ဇနီးသည်အပေါ် သဘောထားကြီးပြီး နားလည်ဂရုစိုက်သူဖြစ်လို့ ခင်လွှမ်းရဲ့ ဘ၀လေးက ပြီးပြည့်စုံပြီး အေးချမ်းပါတယ်နော်။ ဒါ့အပြင် ယောက္ခမဖြစ်သူကလည်း သမီးအရင်းလေးလို ဂရုစိုက်ပြီး သည်းသည်းလှုပ်အချစ်ပိုတာဖြစ်လို့ ခင်လွှမ်းကို မိန်းကလေးတိုင်း အားကျနေရတာပါ ။
ခုဆိုရင် ချစ်စရာ သမီးလေးပါသူတို့ ဘဝထဲကို ရောက်ရှိ လာပီဖြစ်လို့ ပိုလို့တောင် ပျော်ရွှင်နေကြတာပါ ။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အရွယ်ရောက်လာပြီး ချစ်စရာကောင်းလွန်းနေတဲ့ သမီးလေးက အခုဆိုရင် သုံးလပြည့်သွားပြီလို့လည်း သိရပါတယ် ။ သမီးလေးရဲ့ ချစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ ပုံလေးတွေနဲ့ အတူ ” Happy3month old baby shandra . Mom and dad love you lots ” ရေးသားဖော်ပြထားရာ ပရိသတ်ကြီးအတွက် ပြန်လည်ဖော်ပြပေး လိုက်ပါတယ် ။
အသကျသုံးလပွညျ့သှားပွီဖွဈတဲ့ သမီးလေးအတှကျ ဆုတောငျးစကားလေးဆိုကာ ခဈြမဝဖွဈနတေဲ့ မမေခေငျလှမျး
ခငျလှမျး ကတော့ အနုပညာ လောကမှာ နရောတဈခုကို အခိုငျအမာ စိုကျထူ ထားနိုငျတာဖွဈပွီး အောငျမွငျမှုတှလေညျး တဈခဲနကျ ရရှိထားတဲ့ သူတဈယောကျပါ။ ဒါ့အပွငျ သာယာတဲ့ အိမျထောငျရေးလေးကို ပိုငျဆိုငျထားတာကွောငျ့ အားလုံးက ခဈြခငျ အားကနြရေတာလညျးဖွဈပါတယျ ။
ခုဆိုရငျ ခဈြစရာ သမီးလေးပါသူတို့ ဘဝထဲကို ရောကျရှိ လာပီဖွဈလို့ ပိုလို့တောငျ ပြျောရှငျနကွေတာပါ ။ တဖွညျးဖွညျးနဲ့ အရှယျရောကျလာပွီး ခဈြစရာကောငျးလှနျးနတေဲ့ သမီးလေးက အခုဆိုရငျ သုံးလပွညျ့သှားပွီလို့လညျး သိရပါတယျ ။ သမီးလေးရဲ့ ခဈြစရာကောငျးလှနျးတဲ့ ပုံလေးတှနေဲ့ အတူ ” Happy3month old baby shandra . Mom and dad love you lots ” ရေးသားဖျောပွထားရာ ပရိသတျကွီးအတှကျ ပွနျလညျဖျောပွပေး လိုကျပါတယျ ။
ဂျာမဏီနိုင်ငံမှာပြုလုပ်မယ့် Oldenburg International Film Festival တွင် Official Competitation အတွက် ရွေးချယ်ခြင်းခံထားရတဲ့ အူဝဲနဲ့သုသုပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား